Limingbio Co Ltd. dia nitafatafa tamin'ny haino aman-jery Hong Kong
Miketrika ny orinasa sinoa hamaly ny fangatahana manerantany ho an'ny kitapom-panadinana coronavirus na dia efa maina aza ny fangatahana ao an-trano, saingy tsy mahavita ampy ny juggernaut famokarana ... Finbarr Bermingham, Sidney Leng ary Echo Xie Ho fampitahorana amin'ny fihanaky ny coronavirus any Shina ...
LimingBio dia nahazo ny taratasy fanamarinana fisoratana anarana ANVISA any Brezila ary niditra tao amin'ny lisitry ny fividianana ofisialy any Indonezia
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-07-19
Abstract Vao tsy ela akory izay, Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd. (www.limingbio.com) SARS-COV-2 lgM / IgG Antibody Rapid Test Kit dia voamarin'ny Biraon'ny Fanaraha-maso ny Fahasalamana Nasionaly Breziliana ary nahazo ny fanamarinana ANVISA. Amin'ny ...
LimingBio dia nahazo ny fisoratana anarana ANVISA any Brezila ary ny taratasy fanamarinana fisoratana anarana any Singapour sy indonesia
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-06
Abstract Vao tsy ela akory izay, Nanjing Liming Bio-Products Co., Ltd. (www.limingbio.com) SARS-CoV-2 lgM / IgG Antibody Rapid Test Kit dia voamarina avy amin'ny Birao Fanaraha-maso ny Fahasalamana Nasionaly Breziliana ary nahazo ny mari-pahaizana ANVISA. Amin'ny ...
Miezaka manangana vondrom-piarahamonina misy lahatra manerantany!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-05-01
Ady iray eran-tany ─ fiaraha-miasa iraisam-pirenena hananganana vondrom-piarahamonina iraisan'ny tanjona iraisana mamaly ny fanambin'ny valanaretina COVID-19 Ny famelezana virus coronavirus nanerana an'izao tontolo izao dia niteraka krizy pandemio COVID-19 eran'izao tontolo izao. Ilay virus coronavirus dia tsy misy ...
Ny zavatra niainan'i Shina tamin'ny Diagnosis Novel Coronavirus Pneumonia
Iza no fomba tsara indrindra? —Ny fitsapana ny Diagnosis amin'ny aretina SARS-CoV-2 Ho an'ny tranga COVID-19 voamarina dia nitatitra fa ireo soritr'aretina klinika mahazatra dia misy ny tazo, kohaka, myalgia na havizanana. Saingy ireo fambara ireo dia tsy mampiavaka ny COVID-19 satria ireo ...
H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana,